Njengoba ikhava ebusika kwesokudla rhododendrons
Lapho engadini kukhona amahle siluhlaza nezihlahla, main inkinga umtshali ukugcina "umhlali" izimbali ezintsha enempilo futhi ngamandla. Yingakho abantu abaningi kangaka ukhathazekile mayelana nendlela amboze rhododendrons ebusika. Ukuze ukhethe isu ukunakekelwa kwesokudla zalesi sitshalo odinga ukukwazi ngohlobo lwakhe. Ngo incazelo kohlobo oluthile rhododendron izobonisa izinga lokushisa ubuncane elikuqukethe.
Isivikelo izinhlobo frost ukumelana
Abalimi abaningi abanolwazi cabangela lesi sitshalo ngempela ngokuthi untekenteke futhi ukushisa-onothando, kodwa kufanele acabangele impumelelo yokuzalanisa yesimanje. izinhlobo eziningi ezintsha akudingeki ukuba ekuxazululeni impikiswano kanjani ukumboza rhododendrons. Abakwazi ukubekezelela okushisa lokususa 35-40 ° C. Le Inkomba ibalwa kuphela izinso, isitshalo uqobo kalula uthumele Ubusika ngaphansi kwezingaqhwa. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi siluhlaza nezihlahla nemithi bayaqhubeka shabalala umswakama, ngisho ebusika.
Ukuze rhododendron angabhubhi kusuka desiccation ngenxa yokuthi amanzi kudingekile akusho egeleza inhlabathi eqandisiwe, kubalulekile ukuze ziqiniseke ukuthi zinamanzi efanele okusamanzi ngisho ekwindla. Ukuze wenze lokhu, inhlabathi iba kahle Uzithukululile, bazithela semboza ngabo izithombo zezihlahla nge abavamile zikaphayini ngezidladla. Ungasebenzisa oat utshani, kodwa emisha enjalo asifanele wonke zezitshalo. Khona-ke kudingeka uqhubeke uyifundisa ukuncika noma ukuthambisa ngokulinganisela kuze phansi cishe the hlahla akuyona chilled.
Ngaphezu kwalokho enquma ngqo umbuzo kanjani ukumboza rhododendrons ebusika. Ngemva ungqimba wokuqala frost zikaphayini ngezidladla luyanda, ephansi eceleni amagatsha futhi izimpande wathela ngokucophelela ungqimba netolstym okulungiselelwe Peat esidi, uphayini izinaliti noma izinga umquba. Zonke ezinye izinyathelo zincike onjani ezihlukahlukene Simila endaweni.
Shelter zinhlobo thermophilic
Uma ingadi ezikhulayo sesitshalo, awukwazi ukumelana amakhaza, kungadinga letengetiwe. Thanda rhododendrons ukumboza ebusika zokuvikela lezi zilwane thermophilic kakhulu? Kuyodingeka ozimele ezikhethekile, abenziwe kraft iphepha noma horticultural isigubungelo izinto (AGROTEKS, spandbond, lutrasil nabanye abaningi). Futhi kudingeka zikaphayini noma ngesihlahla sonwele amagatsha ngesihlahla sonwele futhi kwezinye izimo, eyomile -oak leaf. Zonke izinhlobo lezihlahla eziqinile ngokwanele, ngakho badinga kuphela ukuze agobe amagatsha ezingeni eliphansi, futhi uzilungise eqhweni.
Autumn nokunakekela nobusika sitshalo esimangalisayo futhi evala ngaleso waqala entwasahlobo. Lapho iqhwa liqala ncibilika izimpande singenzeka umswakama yokujama tsi. Uma lokho kwenzeka, ukufihla ukuthi rhododendron ebusika ngeke kunendaba. Umbuzo oyinhloko indlela ukuze alondoloze izimpande. Ukuze Esimweni esinjalo akazange kuphakama, kubalulekile kusengaphambili ukuba enze inkatho ekhethekile etholakala emhlabeni kokwehla ngamunye. Ngokusebenzisa ezifana imali ebhange ngeke sokukhipha amanzi angadingeki zanqwabelana emva Udambisa iqhwa.
Manje wonke umuntu azi ukuthi angakwenza kanjani amboze rhododendrons ebusika, udinga ukukhumbula kuphela imithetho embalwa ukususa le Ukuvikelwa. Uyekele isitshalo ukuba aqaphele, ngosuku esinamafu noma kusihlwa. Okwesikhathi esithile, shiya umthunzi kancane ukugwema ilanga ashise amaqabunga. Uma ebusika iqhwa, it kuzodala emoyeni uzimele ezengeziwe zebhodi, esivikela umugqa kusukela isisindo okweqile kanye zokugwema ukuphuka.
Lokuzaliswa hydrangeas: izindlela eziyinhloko
Kungani amahlamvu ezisontekile of utamatisi: sezizathu ezinkulu
Indlela yokutshala umlunge ekhaya?
Utamatisi 'Nastya' - a izinhlobo ekuseni ethandwa
Utamatisi Marmande. Incazelo ezihlukahlukene futhi izici ukutshala
Ukutshala begonias: izindlela kanye nezici.
Indlela ukwenza ukususwa McAfee
Ukwelapha Inja: Izinkinga Nezokwelashwa
Krasnodar esifundeni, amahhotela "zonke okufakayo". Emahhotela aphambili e Krasnodar Territory
Indlela ngokushesha ukupheka imvubelo inhlama for ophaya?
"Ukufaneleka House" ku Ladoga: incazelo, esimisweni amakilasi, ukubuyekezwa
Izindlela zendlela yokwenza kvass ekhaya
Montenegro. Petrovac. Izibuyekezo futhi abantu abajwayele ukuvakasha kuyona incazelo
Indlela yokwenza ama-arches avela kubhola: inqubo kanye nezincomo
Ukudla kokudla. Ukupheka nsuku zonke: izitsha ezincane zekhalori
Modern Gurzuf iholide. Uphenyo "ihlobo" izivakashi
"Barska Piwnica": incazelo, ukubuyekezwa